Madaxda IGAD oo ammaanay Doorashooyinka Soomaaliya ka socda – Xeernews24
Madaxda IGAD oo ammaanay Doorashooyinka Soomaaliya ka socda
10. Dezember 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Feederaalka Soomaaliya ayaa magaalada Addis Ababa uga qeyb-galay shir madaxeedka IGAD oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya, kaas oo laga soo saaray baaqyo muhiim ah.
Shirka 29-aad ee IGAD oo ay ka qeyb-galeen madaxweyneyaasha gobolka ee ururkaas, ayaa looga hadlay horumarrada Soomaaliya ay ka sameysay dhanka Doorashooyinka, amniga iyo iskaashiga ay la leedahay dalalka gobolka ku yaalla.
Madaxda IGAD, ayaa ku ammaantay dowladda Feederaalka dowlad Gobolleedyada, guddiyada arrimaha Doorashooyinka ku howlahan iyo ciidammada wadajirka ah ee Soomaaliya iyo AMISOM guulaha ay ka sameeyeen qabsoomidda Doorashooyinka dadban ee Barrlamaaniga ah, kuwaas oo hadda gabo-gabo ku dhow.
Sidoo kale madaxda IGAD ayaa ku baaqdey in la dadajiyo ilaa dhammaadka bishan qabsoomidda Doorashada madaxweynaha iyo Guddoonka Baarlamaanka, iyagoo u rajeeyey in arrintaasi ay u dhici doonto sida loo qorsheeyey iyo waqtiga loogu talo-galay in ay ku dhacaan howlahaasi.
Madaxda IGAD, ayaa ugu baaqdey beesha caalamka in xayiraadda laga qaado xawaaladaha Soomaalida ee dibedda, si ay fursad ugu heleen ka qeyb-qaadashada kobaca dhaqaalaha Soomaaliya iyo isku xidhka ganacsiga xooggan ee waddamada caalamka iyo Soomaaliya u dhaxeeya.
Madaxda IGAD, ayaa sheegtay in ay ku dedaali doono sidii dib loogu bilaabi lahaa dhoofinta xoolaha Soomaaliya iyo dalalka Carabta oo ay Boqortooyada Sacuudiga ugu horreyso, taas oo macno weyn u leh xowliga dhaqaalaha Soomaaliya oo sannadaha soo socda la rajeynayo in uu sameeyo isbaddel ka duwan sidii hore.
Ugu dambeyn madaxda IGAD, ayaa mar kale baaq nabaddeed u jeediyey dhinacyada isku haya dagaallada ka socda waddanka Suudaanta Koonfureed, iyagoo sheegay in ay dedaal walba ku bixin doono joojinta colaaddaasi micna darrada ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/12/igaad.jpg 427 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-12-10 15:44:112016-12-10 15:44:41Madaxda IGAD oo ammaanay Doorashooyinka Soomaaliya ka socda
Wiil sheegtay in u dhalay madaxweynihii Hore Maraykanka Bill clinton Soomaaliya oo si talaabo Talaabo ah ugu soo noqon hayado Caalami ah oo ay mudo...